Dhageyso Wareysi: Madaxweynihii hore ee Puntland oo farriin culus u diray madaxda DF iyo M. Jubbaland | HalQaran.com
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Maamul gobolkeed Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo wareysi siiyay laanta Af Soomaaliga ee VOA-day ayaa ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah.
Dr. Gaas ayaa ka hadlay Caqabadihii maamulkiisa kasoo gaarey khilaafkii soo kala dhexgalay isaga iyo dowlada federalka ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Gaas waxa uu ka hadley shaqsiyada intuu ka yaqaano guddoomiyhii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho, Eng. Cabdiraxaamn Cumar Cismaan (Yariisow) oo u geeriyoodey Qarax ka dhacay gudaha xafiiskiisa.
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland ayaa waxaa wareysiga la yeeshay Weriyaha VOA-da Sahra Cabdi Axmed.
Hadda hoos ka dhageyso wareysiga oo buuxa:
Madaxweynihii hore Puntland